Tambatra : « Tsy mahavaha olana ny mpitondra… » (NewsMada) | AEMW
Tambatra : « Tsy mahavaha olana ny mpitondra… » (NewsMada)
Nivoaka amin’ny fanginany. « Tsy maintsy mifampiresaka isika. Tsy afaka mamaha olana intsony ny fitondrana ka mety amin’ny filoha ny manome fahefana amin’ny olona tsy voafatopatotry ny HVM, handamina ny firenena… Aza avela ho potika ny firenena », hoy ny filohan’ny Tambatra, Rakotoniaina Pety, tetsy Anosy, omaly. Nahitsy izy ireo nilaza fa tena latsaka an-katerena ny firenena ary tsy manana antenaina ny vahoaka. « Mila tetika izany hialana amin’ny fahantrana ary efa voarakitray anaty boky ny hevitra momba ny politika sy ny toekarena… Tsara ny mifanatona mba tsy ho diso intsony isika… », hoy ihany izy. Notsiahivin’ny Tambatra fa efa tsy nankasitraka ny fifidianana izy ireo ny taona 2013 noho ny fanahiana fa handeha amin’ny lalan-diso sy ny fahantrana isika. « Nambara ho mpanakorontana izahay tamin’izany…Miditra krizy isika izao », hoy izy ireo. Namelively ny mpanao politika koa anefa ireto antoko roa ireto nilaza fa mitovy ihany ny mpitondra sy ireo mihevitra ny hitondra. Te hahazo fahefana fa tsy mihevitra fanovana ireo ka tsy azo ekena.
Aoka tsy hoterena amin’ny vavabasy ny fitoniana
Nohitsiny fa ny ataon’ny mpitondra no tsy mampandeha ny firenena ka tokony hampandini-tena izany. « Avelao halalaka ny kianja hanehoana hevitra… Nahatanteraka ny fifanarahany amin’ny vahoaka koa ve anefa ny mpitondra ? » hoy ny Tambatra. Nambarany fa tsy diso ny tolona rehetra natao saingy tsy nanatanteraka ny fanambiny ireo nahazo fitondrana.
Momba ny fivoizana ny fitoniana kosa, nambarany fa tsy tokony hoterena amin’ny vavabasy izany. Tsy ankasitrahan’izy ireo koa anefa ny hanaovana fifidianana amin’ny 2018 na ny mialoha izany raha tsy mifampiresaka.
← Famonoana vazaha tany Sainte Marie : nanao diabe nanerana ny tanàna ny mponina sy ireo vazaha any an-toerana (NewsMada)
Sambasamba… : hiaka-tsehatra indray i Balita (NewsMada) →